Sal-le alar Moham-madin (ပြုံးပြုံးလေး နှင့်ဂျန္နတ်သွားမယ်) | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← ဂူဗိမာန်တော်အတွင်းရှင်လျှက်စံပယ်တော်မူနေသော ဟယာတောတ်နဗီမိုဟမ္မဒ်စွလ္လာလ္လဟုအလိုက်ဟိစ္စလာမ်
Menses – ဓမ္မတာရာသီသွေး၊မီးတွင်းသွေးနှင့် ရောဂါသွေးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ →
Sal-le alar Moham-madin (ပြုံးပြုံးလေး နှင့်ဂျန္နတ်သွားမယ်)
ယာရဘ်ဘိ စွလ်လေ ၊ဝစွလ်လိမ် ၊ဒါအေမာန် အာဘဒါ ၊
အာလာဟာဘိဘေက ၊ခိုင်ရ်ရေ ခွလ်ကေ ကွလ်လေဟိမ်
O Sunatiner,shower Salaat and Salaam forever
andevenupon Your belove, is the all of creation
လောကီလောကုတ် နှစ်ဌာနလုံးခေါင်းဆောင် မဟာတမန်တော်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(စွ) ၊ လူ့လောကသို့ကြွ မြန်းလာခြင်းသည်အလ္လာဟ်
အရှင်မြတ် ကျွန်ုပ်တို့အားချီးမြင့်သည့် ဆုလာဘ်(နအ်မတ်) များအနက် အကြီးမားဆုံး ဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ အခြားနိအ်မတ်အားလုံး
သည် တမန်တော်မြတ်၏ စွဒကဟ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။အကယ်၍ တမန်တော်မြတ်ကိုမဖန်ဆင်းခဲ့လျှင်စကြဝဋ္ဌာကိုပင် အလ္လာဟ်
အရှင်မြတ်က ဖန်ဆင်းတော်မူမည် မဟုတ်ပေ။
မဟာတမန်တော်ကြီး(စွ) ပွင့်လာခြင်းသည် စကြဝဋ္ဌာ အနန္တမှအဖန်ဆင်းခံ ဗန္ဓာများ အေးချမ်းသာယာစေ၍ နှစ်ဘဝငြိမ်းချမ်းရေး
ထိုတမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မာဒ်(စွ) အပေါ်သို့ စွာလဝတ်၊စလိမ်မေတ္တာပို့သခြင်းသည်လည်းကောင်း ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ထားရှိခြင်း
သည်လည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးလှသည်။
……..ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်လည်းကောင်း၊ ထိုအရှင်မြတ်၏ မလာအိကဟ် ကောင်းကင် တမန်များသည်လည်းကောင်း၊ နဗီတမန်တော်မြတ် အပေါ်ဝယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ပို့သကြကုန်၏။ အို-မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည်လည်း ထိုနဗီတမန်တော်မြတ်အပေါ်ဝယ် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ပို့သခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ လွန်စွာ စလာမ် မေတ္တာပို့သခြင်းကိုလည်းကောင်းပြုကြ လေကုန်။ (ကွရ်အန်-၃၃း၅၆ )
ဤကျမ်းတော်မြတ်၏ အာယာတ်တော်တွင် တမန်မြတ်(စွ) အပေါ်သို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင် ဆာလာမ်မေတ္တာပို့သ
တော်မူသည့် အကြောင်းကောင်းကင်တမန်(မလာအိကာ) များကလည်း တမန်တော်မြတ်(စွ) ပေါ်သို့ ဆလာမ် မေတ္တာပို့သကြောင်း သိရှိရပြီးအီမာန်သက်ဝင် ယုံကြည်သော မုအ်မင်အပေါင်းတို့သည်လည်း တမန်တော်မြတ်အပေါ်သို့ စွာလာဝတ်ဆလာမ်မေတ္တာပို့သ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အလာအိကာတမန်များပြုလုပ်သော ပြုကျင့်လုပ်ရပ်ကို မုအ်မင်အပေါင်းတို့အားလည်းလုပ်ဆောင်ရန်
အမိန့်ညွှန်ကြားပေးသည်မှာ မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနားလည်းရမည်ဖြစ်သည်။
သို့အတွက် တမန်တော်မြတ်(စွ) ပေါ်သို့ချစ်ခြင်း မေတ္တာထားခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ စွာလာဝတ်မေတ္တာပို့သခြင်းသည်
လည်းကောင်းမုအ်မင်၊အီမန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အပေါ်တွင် အထူးအရေးကြီးသော တာဝန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အလ္လာအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်နာခံ၍ တမန်တော်(စွ) ပေါ်သို့ ဒ ရူးဒ် ဆလာမ်မေတ္တာပို့သခြင်းဖြင့်များစွာကုသိုလ် ၊ ရဟမတ်မင်္ဂလာများရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
……..သို့ဖြစ်လျှင် (အသင်သည်) လက်ယာဘက်သားတို့တွင် ပါဝင်သောကြောင့် အသင့်အဖို့ ငြိမ်းချမ်း မှုသည်ရှိပေမည်(ဟု သတင်းပြောကြားခြင်းကို ခံရပေမည်။)
အထက်ပါအာယာဝတ်တော်အရရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိရသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(စွ) အပေါ်သို့ ဒရူးဒ်ဆလာမ်မေတ္တပို့
သခြင်းသည် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူ သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း ဂျန္နတီဘန္ဒဟ်(သုခဘုံသား) အဆွာဟာဘေယမိန်း
(လင်္ကျားဘက်စာရင်းဝင်)ဟူသည် ဂျန္နတ်သို့သွားခွင့်ရရှိသူများ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် အာမလ်နဟ်ကို လက်ယာဘက်လက်တွင်ရရှိမည့်
ဟဇ်ရသ်အဘူ သွာလ်ဟဟ်(ရဇီ) ကမိန့်တော်မူသည်မှာ – တနေ့သောအခါ တမန်တော်မြတ်(စွ) ၏ရွှေမျက်နှာတော်တွင်
အလွန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေသော အရိပ်အယောင်များပေါ်လွင်နေလျက် ရောက်ရှိလာပြီးမိန့်တော်မူသည်မှာ…ငါကိုယ်တော်မြတ်(စွ)
ထံဂျီဗရာအီးလ်အမီးန်(အလစ) ရောက်ရှိလာ၍ ဤသို့လျှောက်ထားသည်မှာ—-
ကိုယ်တော်မြတ်(စွ)၏ မွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်တော်မူသည်မှာ- ” အို…..မိုဟမ္မဒ်(စွ) အသင်၏ အွမ္မသ်သားတစ်ဦးသည် အသင့်အပေါ်သို့ဒရူးဒ်တစ်ကြိမ်ပို့ပါက ငါအလ္လာအရှင်မြတ်သည်ထိုသူ့အပေါ်(၁၀)ကြိမ် ရဟ်မသ်ပို့သ ပြီး အွမ္မသ်သားတစ်ဦးသည် အသင့်အပေါ်သို့ စလာမ်တစ်ကြိ်မ်ဆက်သပါက ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုသူ့ကို(၁၀)ကြိမ် စလာမ်ပို့သမည်ကို အိုကိုယ်တော်မြတ်(စွ) အသင်သဘောတူသလားဟု မေးမြန်းရာငါကိုယ်တော်မြတ်(စွ)သည် သဘောတူပါသည် “ဟုဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါဟဒီးစ်တော်အရ တမန်တော်မြတ်(စွ)ထံတော်သို့ ဒရူးဒ်တစ်ကြိမ်နှင့် စလာမ်တစ်ကြိမ် ဆက်သသူပေါ်သို့အလ္လာဟ်
အရှင်မြတ်ထံမှ (၁၀)ကြိမ်ရဟမတ် နှင့် (၁၀)ကြိမ်စလာမ်ရောက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
ကန်ဇွလ် အမ္မါလ်ကျမ်းတွင် အထက်ပါဟဒီးစ် တော်ကိုပင် ဖော်ပြထားသည်မှာ….. အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်သည်မှာ
လူတစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ်(စွ) ကို ဒရူးဒ်တစ်ကြိမ် ပို့သပါက ငါအရှင်မြတ်နှင့် ငါ၏ မလာအီကာများသည် ထိုသူအပေါ်သို့ (၁၀) ကြိမ် ဒရူးဒ်ပို့သပါမည်။ အကယ်၍လူတစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ်(စွ) အပေါ်စလာမ်တစ်ကြိမ်ဆက်သပါက ငါအရှင်မြတ်နှင့် ငါ၏ မလာအီကာများ ထိုသူအပေါ်သို့ စလာမ်(၁၀) ကြိမ်ပို့သပါမည်။ (၁၈၁/၂)
မဟာတမန်တော်မြတ်(စွ) ထံတော်သို့ဒရူးဒ်စလာမ် ပို့သသူအပေါ်သို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရဟ်မသ်တေ် မြောက်များ
စွာနှင့် မလာအိကဟ် ကောင်းကင်တမန်များသည် ထိုသူအပေါ်သို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရဟ်မသ်တော်များရရှိရန် ဒိုအာတောင်းဆိုပြီး ထိုသူ့ကို စလာမ်လည်းမြောက်များစွာပို့သပါသည်။
ဟဇ်ရသ်အဗ်နေ့ဝဟ်ဟားဗ်(ရဇီ)က -တမန်တော်မြတ်(စွ)က ဤသိုမိန့်တော်မူသည်ဟု-ဆင့်ပြန်ဆိုသည်မှာ-ငါကိုယ်တော်မြတ်(စွ)
ကို (၁၀)ကြိမ် စလာမ်ဆက်သပါက ထိုသူသည် ကျွန်တစ်ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးသကဲ့သို့ အကျိုးခံစားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟဇ်ရသ်အဘူဘကရ် ဆွိဒ္ဒီးက်(ရဇီ) ကမိန့်တော်မူသည်မှာ…..
တမန်တော်မြတ်(စွ)အပေါ် ဒရူးဒ်ပို့သခြင်းသည် ဂိုနာဟ်များကိုရေအေးက မီးကိုငြိမ်းစေနိုင်သကဲ့သို့ပယ်ပျက်နိုင်ပြီး၊ ကိုယ်တော်
်မြတ်(စ)ကို စလာမ်ဆက်သခြင်းသည် ကျွန်တစ်ယောက်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည်ထက်ပို၍ မွန်မြတ်ပါသည်။
(ရှဖာကျမ်း – နှာ – ၆၁/၂)
ဟဇ်ရသ်အဗ်ဒွလ္လာဟ်အိဗ်နေ့မ(စ်) အူးဒ်(ရဇီ)က တမန်တော်မြတ်(စွ) ဤသို့ မိန့်တော်မူသည်မဟု ဆင့်ပြန်တော်မူသည်မှာ—
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကောင်းကင်တမန်များအုပ်စုသည်ကမ္ဘာ့မြေပေါ်တွင် လှည့်လည်သွားလာလျက် ရှိပြီး၎င်းတို့သည် ငါ၏အွမ္မသ်
သားများ ငါကိုယ်တော်မြတ်(စွ) အပေါ်သို့ ဆက်သသောစလာမ်များကို ငါကိုယ်တော်မြတ်ထံ သယ်ဆောင်ပို့သလေ့ရှိပါသည်။
(နတအီ၊ ဒါရိမီ၊ မိရ်ှကားသ် ကျမ်း – နှာ -၈၆)
အထက်ပါဟဒီးစ်တော်အရ စိုက်ယာဟီးန်၊ မလာအိကဟတ် ကောင်းကင်တမန်တော်များသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် တမန်တော်
်မြတ်(စွ) အားစလာမ် ဆက်သသူများကို လိုက်လံရှာဖွေလျှက်ရှိပြီး၊၄င်းတို့၏စလာမ်များကို တမန်တော်မြတ်(စွ) ထံတော်သို့ အမြဲပို့
ဆောင်ပေးနေလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ဟဇ်ရသ်အဘူဟူရိုင်ရဟ်(ရဇီ) မှတဆင့် ဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ် ဆင့်ပြန်လာရှိသည်မှာ…..
တမန်တော်မြတ်(စွ)က မိန့်တော်မူသည်မှာ….အရှေ့အရပ်မှဖြစ်စေ ၊ အနောက်အရပ်မှဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်မြတ်အပေါ်သို့ မေတ္တာစလ်ာဆက်သပါက ငါကိုယ်တော်မြတ်(စွ) နှင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကောင်းကင်တမန်များက ထိုသူ၏စလာမ် ပြန်လည်ဖြေ
ကြားပါမည်။ (ဂျလာအွလ်အဖ်ဟာမ်၊ဣဗ်နေကိယမ်၊ နှာ -၂၅)
အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော်အရ နှစ်ဘဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာတမန်တော်မြတ်(စွ)ထံတော်သို့မေတ္တာစလာမ်ဆက်သသူ မွတ်စလင်(မ်)တိုင်းကို မဟာတမန်တော်မြတ်(စွ) နှင့် မလာအိကဟ် ကောင်းကင်တမန်တော်များထံမှ စလာမ်၏ဂျဝါးဗ် ပြန်လည်စလမ်
်ပို့သခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်လာ အာယသ်တော် နှင့် ဟဒီးစ်တော် အရ ဆွလာတ်သို့စလာမ်ဒရူးဒ်ရှရီးဖ်ဖတ်ခြင်းနှင့် စလာမ်ပို့ခြင်း၏ ထူးကဲမွန်မြတ်မှုများနှင့် မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ရာ(ရဇီ) သခင်မှတဆင့်ဆင့်ပြန်ခဲပသည်မှာသောကြာနေ့ အာစွရ်ဖတ်ပြီး ၎င်း နေရာ မှမရွေ့ခင်ထိုနေရာ`၌
အောက်ပါ ဒရူဒ်ကို အကြိမ် (၈၀ )တစိထိုင်တည်းဖတ်ပါက ထိုသူ၏ နှစ် (၈၀ )မျှ အပြစ်ဂိုနားကို ကင်းလွှတ်တော်မူမည်အပြင်၊ နှစ်(၈၀)
အီဗါဒဒ် ကောင်းသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့ သည်ဟု ၎င်း၏အမလ်နာမဟ်တွင် ရေးသားမှတ်တင်တော်မူမူမည်။၎င်း ဒရူးဒ်ရှရိဖ်မှာအောက်ပါ
အလ္လာဟ်ဟွမ်မား ၊စွလ်လေအာလာ ၊မိုဟမ်မဒေနိလ် ၊နဗီယိလ် အူမီယေ
ဒရူဒ်ပို့သလျှင်ကုသိုလ်အကျိုးစဝါဘ် ရရှိသကဲပသို့ မပို့သနေပါကလည်း ထိုသူအဖို့ လာအအ်နတ်(ဘေးထိုက်ကြောင်း) ကျမ်းတော်
( )။ -တမန်တော်မြတ် အမည်နာမတော် ကြားပါလျက် တမန်တော်မြတ်အပ်ါသို့ (စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ဟု ဒရူဒ်ပို့သခြင်း
မပြုပါက ထိုသူသည် ဣနြေ္ဒ သိက္ခာမဲ့ သူဖြစ်ပါစေ၊ ထိုသူသည် အလွန် စေးနဲသူဖြစ်သည်။
(၂)။-တမန်မြတ်(စွ) သည် ပလီ၏မိန်ဘရ်( တရားဟော လှေကားပလ္လင် ) တက်နေစဉ် ဂျိဘ်ရိလ် သခင်ကြွရောက်၍ ( ၃ ) ခု သော
စကားကို ဘဒ်ဒူပြုလုပ်ခဲ့သည်။၎င်း အနက် ဒုတိယမြောက် စကားမှာ-တမန်တော်မြတ်၏ နာမတော် ကိုကြားပါလျက် တမန်တော်မြတ်
အပေါ်သို့ (စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ဟု ဒရူဒ်ပို့သခြင်းမပြုပါက ထိုသူသည် ပျက်စီးပါစေ ဟူသော ကျိန်စာ အပေါ် တမန်တော်
မြတ်က အမိန်(အလ္လာအရှင်မြတလက်ခံတော်မူပါ)ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။
(၃)။-ဟဇရတ် ဂျ လဲရ်(ရဇီ)မှတဆင့် ဆင့်ပြန်သည်မှာ—(တမန်တော်မြတ် အမည်နာမတော် ကြားပါလျက် တမန်တော်မြတ်အပ်ါသို့ (စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ်)ဟု ဒရူဒ်ပို့သခြင်းမပြုပါက ထိုသူသည် အလွန်ကံဆိုးဖြစ်သည်။ (နစာအီကျမ်း)
(၄)။-ဟဇရတ် ဟဘ္ဘရတ် (ရဇီ)မှတဆင့် ဆင့်ပြန်သည်မှာ– တမန်တော်မြတ် ဤကဲ့သို မိန်တော်မူ၏ဂျိဘ္ဘရိလ်သခင်သည် အလ္လာ၏အရ်ရှကလ္လင်နေ၍အော်ဟစ် မိန်တော်မူသည်မှာတမန်တော်မြတ်၏မည်နာမတော် ကြားပါလျက် တမန်တော်မြတ်အပ်ါသို့ (စွလ္လာလ္လာဟု အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ဟု ဒရူဒ်ပို့သခြင်းမပြုပါက ထိုသူသည် ဂျဟန္နမ်ငရဲသို့သွားမည်။(ကန္ဇလ်အအ်မာလ်၊ဒလယ်မီ)
ဖတ်လွယ်၊မှတ်လွယ်၊ကျက်လွယ် သော ဒရူးဒ်စွာဝါတ် အချို့ကိုအောက်တွင်မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။
မြောက်များစွာသောဒရူး အမျိုးမျိုးကို ပေးထား လင့်( link ) များကလိက် လုပ်၍အလွယ်တကူဖတ်နိုင်ပါသည်။
၁။–ဘိစ္စမိလ္လာ ဟေဝစ္စလာမူ အလာ ရစူလိလ္လာ
၂။–ဂျဇလ္လာဟု အန္နား မိုဟမ္မဒါန် မာဟုဝါလဟု
၃။–အလ္လာမွမ္မား စွလ်လေ အလာ မိုဟမ္မဒင် ဝအန်ဇေလဟွလ် မောက်အာဒွလ် မူကရ် ရဘာ အင်ဒက ယွဝ်မလ် ကိယာမာ
၄။–အလ္လဟွမ္မား စွလ္လေ အာလာ မိုဟာမ္မဒီယောင်း ဝအာလာ အာဗီနာ အိဘ်ရာဟင်မ်
၅။–အလ္လာဟွမ္မား စွလ္လေ အာလာမိုဟမ္မဒင် နိ် နဗီအိလ် အူမိယေ ဝအာလာအာလေ ဝစလာမ်
၆။–အလ္လာ ဟွမ္မားစွလ်လ္လေအာလာ မိုဟမ္မဒင်
ရ။–အလ္လာဟွမ္မား စွလ္လေအာလာ မိုဟာမ္မဒင် ကွလ္လမား ဇကရုဇ် ဇာကေရုနာ ၊ဝကွလ္လမား ဂဖလာ အန်ဇိက် ရိဟိလ် ဂါးဖေလုန်း။
၈။–အလ္လာဟွမ္မား စွလ္လေ အာလာမိုဟမ္မဒင် ကမာ ၊ တူဟိဘ်ဘူး ဝတရ်ဇာ လဟု။
၉။–စွလ္လာဟု အလိုက်ကာ ယာနူရေ မိုဟမ္မဒင် ၊ နူရုန်း၊ မိန်းနူရိလ္လား။
၁၀။–အလ္လာဟွမ္မား စွလ္လေ အာလာ မိုဟာမ္မဒင် နဗီ ယိလ် အူမိယေ ၊ဝအာလာလေဟိ ဝအာစွာဟာဘေဟိ ၊ဝဘာရေက် ဝစလ် လိမ်။
မိမိကြိုက်နှစ်သက် ဒရူးဒ်ရှရိဖ်များကို လင့်ဖွင့် ဖတ်နိုင်ပါသည်။
Images for darood
Benefits and bounties of reciting duroodDurood in Arabic
Muhammed has clearly proclaimed that Durood Shareef is the panacea of all ills and that if any one comes acrossacalamity he should recite the maximum number of Durood Shareef and God has promised that:
if anyone recites Durood only once, He showers ten blessings on the reciter immediately.
In various books of Hadith like Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawood, Al-Muwatta, Al-Sunan al-Sughra, Sunan ibn Majah, Darmi, Sunan al-Bayhaqi and Miskhaat Shareef, certain benefits of reciting Durood are mentioned. Below isalist of some mainly from Sahih al-Bukhari:
3. The first man who will meet Muhammed on the Day of Judgement will be that person who had recited the Durood maximum number of times in his lifetime.
4. Those who recite Durood in maximum number will be nearest and dearest to Muhammad in the next world.
7. If the Sawaab[clarification needed] of the Durood Shareef is dedicated to another person, then that person will receive the Sawaab, while the Sawaab of the reciter will not be lessened.
11. Whenaprayer is made to Allah it is never accepted unless praise of Allah Ta’ala and Durood Shareef on Muhammad is first of all recited.
13. Three persons will be under the cool shade and the favours of Allah Ta’ala on the Doom’s Day. One who kept Muhammad’s Sunnah alive, one who removed difficulty ofafellow being and one who recited maximum number of Durood Shareef in his lifetime.
16. The reciter of 10 Duroods in the morning and 10 in the evening will receive the help of Muhammad on the Day of Judgement.
17. One who recites Durood Shareef near the shrine of Muhammad is heard by him there and then alone.
19. IfaDurood is written inabook by someone, Angels of Allah shower blessings on him till the Durood remains in that book.
20. Muhammad said that he himself recites blessings on one who recites Durood on him.
23. All people will be presented to Muhammad with their habits, natures and distinct manner, so it is obligatory foraman to recite maximum number of Durood.
28. Recite Durood Shareef in countless number on Friday, as it is presented to me (Muhammad).
31. If the name of Muhammad is mentioned and one who hears it but does not recite Durood Shareef, understand that he has forgotten the path to Paradise.
32. “I pray for all those who recite Durood on me”, said Muhammad.
33. If any one recites Durood Shareef from any place, any part of the world from any distance, it actually reaches Muhammad immediately. Allah Ta’ala has appointed several Angels who are given exclusive duty to collect all Durood Shareef and present the same before Muhammad immediately.
36. Wherever you are, from any quarter of the world, you must recite Durood as it reaches Muhammad.
38. Muhammad said to his wife that any one who hears the name of Muhammad and does not recite Durood on him will not see the beautiful face of Muhammad on the Day of the Judgement.
39. Sayyiduna Ali (radi Allahu anhu) reports that Rasoolullah said, “The real miser is he in whose presence I am mentioned and then he fails to recite “Durood” on me”.
40. Ifaperson recites 1,000 Durood Shareef daily, he will never die unless he himself sees his place in Heaven with his own eyes.
41. The Durood Shareef that is recited by the person is written withaGolden Pen onaSilver tablet by the Angels. The Angels then present this Durood Shareef to Sayyiduna Rasoolullah and proclaim, “O Habeeb of Allah! The son of such and suchaperson has presented this gift in your majestic court”.